ယောင်းရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် အလှဆင်နိုင်ဖို့ - For her Myanmar
ယောင်းရဲ့အိပ်ခန်းလေးကို နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် အလှဆင်နိုင်ဖို့
အခန်းပြင်ကို ရိုက်ထုတ်တောင် မထွက်တော့ပါဘူးနော်
ယောင်းတို့ရေ … Stella အတွက်တော့ အိပ်ခန်းဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်ဘုံဗိမာန်လေးပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဝေးမှာနေချင်တိုင်း အခန်းထဲမှာ စာဖတ်ရင်ဖတ်၊ မဖတ်ရင် ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတာကို သဘောကျတယ်။ ခရီးဝေးကပြန်လာတိုင်း ကိုယ့်အိပ်ရာပေါ်လှဲလိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်က ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး ဟုတ် ? ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဘုံဗိမာန်လေးကို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံနေစေအောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
ဒါကတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရောင်၊ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေ အလိုက် အိပ်ခန်းကို decorate လုပ်တာပါ။ အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆို တောအုပ်ထဲရောက်သွားစေသလို ခံစားရစေမယ့် ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်လို့ တစ်ခန်းလုံးကို သစ်ရွက်စိမ်းရောင်တွေ၊ အိမ်တွင်းစိုက်အပင်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
Related article >>> ခေတ်ဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ အခြေခံအချက် (၉) ချက်
(၂) Fairy lights
နတ်သမီးအလင်းလို့ခေါ်တဲ့ faiy lights လေးတွေက အိပ်ခန်းကို အလှဆင်ဖို့ အလှဆုံးပါပဲ။ တစ်ခန်းလုံးအမှောင်ချထားရင်တောင် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းနေမှာမို့ အမှောင်ကြောက်တဲ့ ယောင်းယောင်းတွေကို အဖော်ပြုပေးမှာနော်။
Minimal ကတော့ ဒီခေတ်မှာ တော်တော်ခေတ်စားလာတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။ Minimalist ဆိုတဲ့သဘောတရားက အဆင်တန်ဆာနည်းနည်းနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အလှဆင်တာပါ။ အရိုးဆုံးက အရှင်းဆုံးပဲ ဟုတ်?
Stella တို့ ငယ်ငယ်က ဒစ်စနေးကာတွန်းတွေ၊ ဘာဘီကာတွန်းတွေမှာ မင်းသမီးတွေရဲ့ အိပ်ခန်းဆောင်လိုမျိုး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အလှဆင်ထားတဲ့ အိပ်ခန်းတွေပါ။ သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ ရေမြှုပ်မွေ့ယာတွေ၊ ခြင်ထောင်ရှည်တွေစတဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေချည်းပဲမို့ ပြုပြင်စားရိတ်ကတော့ မနည်းမနောကုန်မယ် ထင်ပါတယ်။
အိပ်ခန်းတစ်ခန်းဟာ ကိုယ့်ကို နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေးနိုင်ရမယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ Stella အတွက်တော့ ဒီလိုအိပ်ခန်းမျိုးက တကယ့်နတ်ပြည်ပါပဲ။ နေရောင်နွေးနွေးဖြာကျပြီး လေတဖြူးဖြူးတိုက်တဲ့အပြင် ခေါင်းအုံးတွေတစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ အလှဆင်ထားတော့ အိမ်ပြင်တောင်ထွက်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး
ယောင်းတို့စိတ်ကူးထဲက အိပ်ခန်းပုံစံလေးကရော ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲ?
အခနျးပွငျကို ရိုကျထုတျတောငျ မထှကျတော့ပါဘူးနျော
ယောငျးတို့ရေ … Stella အတှကျတော့ အိပျခနျးဆိုတာ ကိုယျပိုငျဘုံဗိမာနျလေးပဲ။ တဈခါတဈလေ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ အဝေးမှာနခေငျြတိုငျး အခနျးထဲမှာ စာဖတျရငျဖတျ၊ မဖတျရငျ ရုပျရှငျကွညျ့နရေတာကို သဘောကတြယျ။ ခရီးဝေးကပွနျလာတိုငျး ကိုယျ့အိပျရာပျေါလှဲလိုကျရတဲ့ ခံစားခကျြက ဘာနဲ့မှမလဲနိုငျဘူး ဟုတျ ? ဒီတော့ ကိုယျ့ရဲ့ဘုံဗိမာနျလေးကို ကိုယျခဈြရတဲ့အငှအေ့သကျတှနေဲ့ လှမျးခွုံနစေအေောငျ ဘယျလိုပွငျဆငျရမလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျ …
ဒါကတော့ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အရောငျ၊ ကိုယျနှဈသကျတဲ့အရာတှေ၊ ကိုယျနှဈသကျတဲ့ခံစားမှုတှေ အလိုကျ အိပျခနျးကို decorate လုပျတာပါ။ အခုပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျးဆို တောအုပျထဲရောကျသှားစသေလို ခံစားရစမေယျ့ ဒီဇိုငျးလေးဖွဈလို့ တဈခနျးလုံးကို သဈရှကျစိမျးရောငျတှေ၊ အိမျတှငျးစိုကျအပငျလေးတှနေဲ့ အလှဆငျထားတာ တှရေ့မှာပါ။
Related article >>> ခတျေဆနျဆနျ ဝတျဆငျတတျတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျး လုပျတတျတဲ့ အခွခေံအခကျြ (၉) ခကျြ
နတျသမီးအလငျးလို့ချေါတဲ့ faiy lights လေးတှကေ အိပျခနျးကို အလှဆငျဖို့ အလှဆုံးပါပဲ။ တဈခနျးလုံးအမှောငျခထြားရငျတောငျ မှိတျတုတျမှိတျတုတျလငျးနမှောမို့ အမှောငျကွောကျတဲ့ ယောငျးယောငျးတှကေို အဖျောပွုပေးမှာနျော။
Minimal ကတော့ ဒီခတျေမှာ တျောတျောခတျေစားလာတဲ့ ဒီဇိုငျးပါ။ Minimalist ဆိုတဲ့သဘောတရားက အဆငျတနျဆာနညျးနညျးနဲ့ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး အလှဆငျတာပါ။ အရိုးဆုံးက အရှငျးဆုံးပဲ ဟုတျ?
Stella တို့ ငယျငယျက ဒဈစနေးကာတှနျးတှေ၊ ဘာဘီကာတှနျးတှမှော မငျးသမီးတှရေဲ့ အိပျခနျးဆောငျလိုမြိုး ကွီးကွီးကယျြကယျြအလှဆငျထားတဲ့ အိပျခနျးတှပေါ။ သူ့ရဲ့နာမညျအတိုငျးပဲ ရမွှေုပျမှယေ့ာတှေ၊ ခွငျထောငျရှညျတှစေတဲ့ ဇိမျခံပစ်စညျးတှခေညျြးပဲမို့ ပွုပွငျစားရိတျကတော့ မနညျးမနောကုနျမယျ ထငျပါတယျ။
အိပျခနျးတဈခနျးဟာ ကိုယျ့ကို နှေးထှေးလုံခွုံတဲ့ ခံစားမှုမြိုးပေးနိုငျရမယျလို့ ခံယူထားတဲ့ Stella အတှကျတော့ ဒီလိုအိပျခနျးမြိုးက တကယျ့နတျပွညျပါပဲ။ နရေောငျနှေးနှေးဖွာကပြွီး လတေဖွူးဖွူးတိုကျတဲ့အပွငျ ခေါငျးအုံးတှတေဈပုံတဈပငျနဲ့ အလှဆငျထားတော့ အိမျပွငျတောငျထှကျဖွဈမယျမထငျဘူး
ယောငျးတို့စိတျကူးထဲက အိပျခနျးပုံစံလေးကရော ဘယျလိုပုံစံဖွဈမလဲ?
Tags: Bed, bedrooms, Decoration, Design, Home Decor, inspiration, Interior
ယောင်းကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးမယ့် သီချင်း (၆) ပုဒ်
Stella March 21, 2019
Sugar Cane September 2, 2018
Interior Designer တစ်ဦး၏ တစ်နေ့တာ
Wynee Myanmar August 7, 2018
ကြောင်လေးတွေကို အိပ်ရာထဲ ခေါ်မအိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
Ei Mon June 22, 2018
အသက် ၉၆ နှစ်အရွယ် ဘွားဘွားကြီးရဲ့အသက်ရှူမှားလောက်စရာ အိမ်ကလေး
Miyuki May 24, 2018
Myat Moe March 23, 2018